बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि, ६ सय केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागे !
March 23, 2022 AdminLeaveaComment on बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि, ६ सय केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागे !
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहर भरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एक जना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर, ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी छन् ।
महिलाले नै भरिएको त्यो सहरमा महिलाकै बोलवाला छ । तर, भएर के गर्नु ? पुरुष नपाएर अविवाहित महिला छटपटाउन थालेका छन् । उनीहरुले हालै एक सामूहिक अपिल गरेका छन् अविवाहित केटाहरुलाई आफुसँग सम्बन्ध गाँस्न अनुरोध गर्दै ।
युक्रेनलाई रुसको अल्टिमेटम ! पुटिनलाई जेलेन्स्कीको जवाफ, ‘बरु ध्वस्त हुन्छौँ, आत्मसमर्पण गर्दैनौँ’
हेर्नुहोस MCC पास भएको १ महिना नहुदै चिनियाँ मन्त्री नेपालमा!देउवाको सात्तो गयो,कम्युनीष्ट एकता
भर्खरै त्रिभुवन विमानस्थलबाट आयो दुखद् खबर ! ब’म रहेको आशंका, आन्तरिक उडानका यात्रु बाहिर निकालियो
आ त्मह त्या अघि फेसबुकमा किन शेयर गरिन् त्यो भिडियो ? ‘म त सु’सा’इड गर्ने हो भन्थिन्, जिस्केको ठान्यौं’